इलाममा ट्रयाक्टर चलाएर तेज बहादुर कमाउँछन् महिनामा ६० देखि ७० हजार !
उनको जीवनको लामो समय ट्रयाक्टरसँग बित्यो। धेरै उतारचढाव आए। साहुको ट्रयाक्टर चलाउनेदेखि आफ्नै ट्रयाक्टरको मालिक हुँदासम्म उनले के मात्र गरेनन्? के के मात्र भएन? यो उनकै कथा हो।
उनी अर्थात् इलामका तेज बहादुर तामाङ। पहिलोपल्ट साहूको ट्रयाक्टर चलाउन थाल्दा २१ वर्षका थिए। आफ्नो साधन थिएन। ७ वर्षसम्म पनि साहुकै ट्रयाक्टर चलाइरहँदा आफ्नै ट्रयाक्टर किन्न मन लाग्थ्यो। तर हातमा पैसा नभएको यथार्थले पुन: त्यही ट्रयाक्टरमा बसाउँथ्यो।
कहिलेकाहीँ त यहाँ बसेर केही हुँदैन जस्तो लागेर विदेश जाने कि भन्ने पनि सोच्थे। एकपल्ट त भिसा पनि आइसकेको थियो। तर उनको घाँटीमा अन्तिम समयमा केही समस्या आयो। त्यही समस्याले उनलाई हिँड्न दिएन। सायद यहाँ नै केही गरोस् भन्ने समयको पनि इच्छा थियो होला। बाध्यता नै सही, एकपल्ट त्यसरी रोकिएपछि उनले फेरी विदेश जाने प्रयास गरेनन्।
नेपालमा नै केही गर्नलाई भने हार मानेनन्। आफू जस्तै पाँच जना अरू साथीहरूसँग मिलेर पार्टनरसिपमा ट्रयाक्टर किने। त्यसैलाई चलाउन थाले।
पार्टनरसिपमा चलाएको ट्रयाक्टरले पनि लामो समय सन्तुष्टि दिएन। आफ्नै ट्रयाक्टर किन्ने रहरलाई छोड्न सकेनन्। त्यसका लागि पैसा जम्मा गर्न थाले। बिस्तारै बिस्तारै जम्मा हुन थाल्यो। केही समयपछि पार्टनरसिपमा किनेका सबै ट्रयाक्टरहरू उनले आफ्नो नाममा किने। नयाँ किन्दा १९ लाख जति पर्ने एउटा ट्रयाक्टर ९ लाखमा नै आफ्नो भयो।
जीवनमा सुखले चिहाउन थाल्यो। केही समय अघि अरूको समय अनुसार चल्नुपर्ने मान्छे अब आफ्नै हिसाबले चल्न सक्ने भए। व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुन थाल्यो। मासिक ६० देखि ७० हजारको कमाइ गाँउमा नै बसेर कमाउन थाले। ट्रयाक्टरलाई व्यस्त राख्नको लागि काम खोज्न अलिक धाउनुपर्थ्यो तर झर्को मानेनन्। अहिले कता आफ्नो ट्रयाक्टरको आवश्यकता छ भनेर खोजिरहन्छन्। कति सेवाग्राही उनलाई खोज्दै पनि आइपुग्छन्।
परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन तथा सबै सदस्यका इच्छाहरू पुरा गर्न ट्रयाक्टर व्यवसायले सजिलो भएको छ। ४ जनाको सानो परिवार। एक छोरा ८ कक्षा र अर्को छोरा १२ मा पढ्दैछन्। ठुलो छोरा काठमाडौँमा बसेर पढ्दै छन्। छोराहरूलाई पढाउन र परिवारको अन्य खर्च जुटाउन त्यसैको आम्दानीले नै पुगिरहेको छ।
गाडी चलाउने सीप नहुँदो हो त जीवन अर्कै केही हुन्थ्यो होला। २१ वर्षमा जानेको त्यही सीपले उनलाई आफ्नै ट्रयाक्टरको मालिक बनाइदिएको छ।
अहिले तेजबहादुर नेपालमा नै सम्भावना देख्न थालेका छन्। अनुभवले धेरै सिकाएको छ। बेलाबेला यताउता भेटिने गाउँका युवाहरूलाई पनि यहाँ नै बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरू दिन्छन्। उनी समय लाग्ला तर मेहनेत गरेमा सफल बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण भएका छन्।